CUA : nofanina momba ny tetibola ny mpiasa | NewsMada
CUA : nofanina momba ny tetibola ny mpiasa
Par Taratra sur 14/10/2017
Nosokafan’ny filohan’ny filankevitra monisipaly, Andriambahoaka Faustin, tamin’ny fomba ofisialy, ny fampiofanana ireo tompon’andraikitry ny kaominina Antananarivo Renivohitra mikasika ny resaka tetibola.
Tonga nanatrika izany ireo tompon’andraikitra mpanatanteraka ao amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ary ireo solontena avy ao amin’ny minisiteran’ny Atitany sy ny fanapariaham-pahefana ary ireo solontenam-panjakana maro samihafa mikasika ny fikirakirana ny tetibola izay notontosaina tao amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely.
Araka ny fangatahana nataon’ny CUA ny hanaovana ny fampiofanana mikasika ny «budget de programme » tonga ny tompon’andraiki-panjakana mpikirakira ny tetibola sy ny Institut national de la décentralisation et du développement local.
Namaly ny antso izy ireo ny alakamisy teo nampiofana ireo mpiasan’ny kaominina. Misy ny lalàna 2014-02 ao amin’ny andininy faha 139 milaza ny fampiharana ny « bugdet de programme » ho an’ireo vondrom-bahoaka-paritra itsinjaram-pahefana ka tafiditra amin’izany ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Hatomboka ny 2018 ny fampiharana ny « budget de programme » ary tsiahivina fa ny atao hoe : « budget de moyen » hatrany no nampiharina. Manamora ny fidiram-bolan’ny CUA sy ny fandaniam-bola ny tombontsoa amin’izany. Mora kokoa ny fanaraha-maso.
Fantatra fa tsy vao izao ny eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra no nanao fiofanana mikasika ny fitantanana ny tetibola fa efa nisy mpanolotsaina James Robinson avy ao amin’ny Banky iraisam-pirenena sy ny FMI avy any Etazonia tonga niara-niasa tamin’ny kaominina nizara traikefa ary mbola hiverina.
Amin’izao fotoana izao, misy solontena avy ao amin’ny CUA manatrika fampiofanana any Etazonia mikasika izany.